ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်တာလဲ? | ဂန္တ၀င်
Home ခံစားမှုရသ ပုံပြင်များ ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်တာလဲ?
လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ကားအသစ်လေးကို သေသေချာချာ ပွတ်တိုက်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူရဲ့ (၄)နှစ် အရွယ်သမီးကလေးက ကျောက်ခဲလေးနဲ့ ကားကို ခြစ်နေတာကို သိသွားတယ်။ သူလည်း ဒေါသတွေထွက်ပြီး အနားမှာရှိတာနဲ့ ကလေးလက်ကလေးကို မရပ်မနားရိုက်တော့တာပဲ။ နောက်မှသူသတိပြုမိတာက သူရိုက်နေတာ ခွရှင်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လေ။ ဆေးရုံကိုရောက်သွားတော့ ကလေးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေက ဘယ်လိုမှပြန်ဆက်လို့မရတော့လို့ ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမီးလေးက နာကျင်တဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ ” ဖေဖေ.. သမီးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေက ပြန်ပေါက်လာမှာလား ဟင်”ဟုမေးတော့ ဖခင်လည်း အလွန်နာကျင် ၀မ်းနည်းပြီး ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး။ အိမ်ပြန်ရောက်ကြတော့ သူ့ရဲ့ကားကိုတွေ့တော့ နာကျည်းစွာ ကန်တော့တာပဲ။ သူလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ယူကျုံးမရဖြစ်နေတဲ့ ကလေးအဖေလည်း သမီးလေးခြစ်ထားတဲ့စင်းရာလေးရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်တော့ သူတွေ့ရတာက ‘ဖေဖေ့ကိုချစ်တယ’် ဟူသော သူ့သမီးလေးရေးထားတဲ့ စာကလေးပါ။
သင်ခန်းစာ – ဒေါသ နဲ့ အချစ် မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိဘူးဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတာ အသုံးချဖို့အတွက်ပါ။ လူဆိုတာ မေတ္တာထားဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာတော့ လူတွေက အသုံးချခံနေရပြီး ဥစ္စာပစ္စည်းတွေက ချစ်ခံနေရပါတယ်။
Previous articleအိမ်ထောင်ပြုခြင်း နှင့် ပတ်သက်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရလဒ်ကောင်းများ
e-Wallets သုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာနိုင်လဲ
ဂန္ထဝင်စာချစ်သူများအတွက် ဂန္ထဝင်လက်ဆောင်အိတ်လေး ရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်
ရည်းစားဟောင်းကို စိတ်မပြတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူအပေါ် ပြတ်သားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ချစ်နေသေးတယ်။
သင့်လက်တွဲဖော်ဟာ ပြီးပြည့်စုံသူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။
မေတ္တာအကြင်နာဆိုတာ လောကကို နွေးထွေးစေတဲ့အရာ